Home News Waa sidee Xaalada Dhaawacadyadii loo qaaday Dalka Turkiga?
Waa sidee Xaalada Dhaawacadyadii loo qaaday Dalka Turkiga?
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Danjire Jaamac Cabdullaahi (Caydiid) oo ka warbixiyay xaalada caafimaad ee dhaawacyadii loo qaaday dalka Turkiga ayaa sheegay in dadka qaar xaaladoodu kasoo raynayso halka kuwa kalena wali lala tacaalayo.
Danjire Jaamac ayaa xusay in ay geeriyootay gabadh kamid ahayd dhaawacyada, wuxuuna raja wanaaagsan ka muujiyay adeegyada caafimaad ee ay wadaan dhaqaatiirta Turkida ee la tacaalaya xaalada dhaawacyada.
“Afar isbitaal ayaa loo qeybiyay dadkii Ankara la keenay, lix iyo toban qof ayey ahaayeen saacad kadib markii dhaawaca la keenay gabadh ardayad aheyd ayaa dhimatay oo jaamacad Banaadir dhiganeysay kulliyada caafimaadka Aamina Cumsan Kheyre AUN, dadka la keenay waxay ahaayeen sagaal dumar ah iyo toban rag ah oo gabadh ay ka dhimatay, afar kamida waa caruur oo da’ doodu u dhexeyso laba ilaa afar iyo toban jir” ayuu yiri Danjire Jaamac.
Danjiraha ayaa sheegay in guud ahaan dadka dhaawaca ah shan qof oo kamida ay xaaladoodu roontahay halka toban kalana ay ku jiraan qeybta xaalada gaarka ah ee caafimaad, taasi oo macanaheedu noqoneyso in dadka badankood ay xaaladoodu adagtahay.
Lix iyo toban qof oo kamid ahaa dadki ku dhaawacmay qarax bishii lasoo dhaafay ka dhacay isgoyska Ex-kontorool ee magaalada Muqdishu ayaa loo qaaday dalka Turkiga, iyadoona ay masuuliyada qaraxaasi sheegtay Alshabaab.